ငိုချလိုက်ပါ – YANGON STYLE
လူတွေက နှစ်သိမ့်ပေးလေ့ရှိတယ်။ စိတ်ထဲမထားပဲ ငိုချလိုက်ပါတဲ့။ ငိုချလိုက်တာဟာ သင့်ရဲ့ နာကျင်မှုနဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ဖြေလျော့နိုင်တာလို့ ပြောကြပါတယ်။
သင် ငိုရင် တိတိကျကျ ဘာတွေ ဖြစ်တတ်သလဲ? သင် စဉ်းစားမိဘူးလား? မျက်ရည်ဆိုတာ သင့်မျက်လုံးရဲ့ အပေါ်အောက် ကြွက်သားတွေဆီကနေ ပရိုတင်းဓာတ်ပြည့်ဝနေတဲ့ ဆားငန်ရေ၊ အကျိအချွဲနဲ့ အဆီတွေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အရည်တွေဖြစ်ပါတယ်။
မျက်ရည်ကို မတူညီတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အပေါ် မူတည်ပြီး
(၁) တစ်ရက်ကို ၅ အောင်စကနေ ၁၀ အောင်စအထိ ကျတဲ့ အခြေခံမျက်ရည်
(၂) မီးခိုးနဲ့ ကြက်သွန်မွန်တာကို အလိုအလျောက် တုံ့ပြန်တဲ့ မျက်ရည်
(၃) ဝမ်းနည်းလို့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ခံစားမှုမျက်ရည် ဆိုပြီး ၃ မျိုး ခွဲခြားထားပါတယ်။
စိတ်ခံစားမှုမျက်ရည်ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ငိုခြင်းလို့ ရှေးလူကြီးတွေက ဆိုကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီလို ငိုချလိုက်ရင် သင့်ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ သက်သာရာရစေလို့ပဲ ဖြစ်ပြီး အဲဒီသီအိုရီကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပါ လက်ခံကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သိပ္ပံပညာရှင်တွေက အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်တဲ့ မျက်ရည်နဲ့ စိတ်ခံစားမှုမျက်ရည်မှာ ပါဝင်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေကို လေ့လာကြည့်တော့ မျက်ရည်နှစ်မျိုးမှာ ဒြပ်ပေါင်းပါဝင်မှု တွေဟာ တူညီခြင်းမရှိပါဘူး။
အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်တဲ့ မျက်ရည်မှာ ယေဘုယျအားဖြင့် ရေဓာတ် ၉၈ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်နေပြီး စိတ်ခံစားမှု မျက်ရည်မှာတော့ များစွာသော ဓာတုဒြပ်ပေါင်းတွေ ပါဝင်လျက် ရှိပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှုမျက်ရည်မှာ ပါဝင်တဲ့ ပထမဆုံးဒြပ်ပေါင်းက နို့ထွက်မှုနှုန်းကို ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Prolactin (ပရိုလက်တင်) ဒြပ်ပေါင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှေးလူကြီးတွေက ကလေးမွေးပြီးကာစ မိခင်တွေ မငိုရဘူး ငိုရင် နို့လည်တတ်တယ် (နို့မထွက်တော့ဘူးလို့ ) ပြောလေ့ရှိတာကိုး။
ဒုတိယပါဝင်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းကတော့ သင့် ကြောင့်ကြစိတ်ရဲ့ Level ကို ညွှန်ပြတဲ့ Adrenocorticotropic Hormones (အက်ဒရီနိုကော့တီကိုထရောပစ်ခ် ဟော်မုန်း) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပါဝင်တဲ့ ဓာတုဒြပ်ပေါင်းကတော့ နာကျင်မှုနဲ့ ကြောင့်ကြစိတ်ကို အာရုံကြောစနစ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ ဟော်မုန်း Lecin-enkephalin (လဆင်အန်ခီပလင်) ဖြစ်ပြီး အဲဒီဟော်မုန်းဟာ သင့်ရဲ့ နာကျင်မှုနဲ့ ကြောင့်ကြစိတ်ကို ဖြေလျော့စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငိုချလိုက်တာဟာ သင့်ရဲ့ နာကျင်မှုနဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ဖြေလျော့နိုင်တာလို့ ပြောဆိုကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် စိတ်ကိုတင်းမထားပဲ ငိုချလိုက်ပါ ပြီးရင် ပြန်ရပ်တည် ပြန်တည်ဆောက်ပါ။